Your jaban Options Repair iPhone hoos ku qoran:
Xulashada 1: Under damaanad
Marka iPhone waa jabtay, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay si aad u hubiso waa haddii aad iPhone weli ka yar yahay damaanad, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay doonaa fursad si aad u hesho jebiyey iPhone cusboonaysiiyey lacag la'aan ah, ama xataa beddelato mid cusub oo bilaash ah. Taasi waa run, waayo, Apple isticmaala qalab. Laakiin waxa aad u baahan tahay in la ogaado waa in dhaawac shil aan hoos iman Apple ee damaanad, oo ay ku jiraan burburka dareere ah. Haddii aad ku jirtid xaalad this, aad u baahan tahay si aad u hubiso xulashooyinka kale ee hoose.
Badan oo ku saabsan macluumaadka damaanad Apple ee: http://www.apple.com/legal/warranty/
Xulashada 2: Isticmaalka AppleCare
AppleCare u iPhone fidiyaa caymiskaaga laba sano laga bilaabo taariikhda asalka ah ee alaabadaas aad iPhone iyo darayaa ilaa laba shil oo caymis dhaawac shil ah. Haddii aad soo iibsatay AppleCare aad iPhone oo weli ay ansax gudahood, waxaad ka fiirsan kartaa.
Kharashka: $ 99 AppleCare (Waxaad ka iibsan kartaa oo keliya 30 cisho oo aad iPhone iibsiga gudahood)
Warbixin dheeraad ah halkan: http://store.apple.com/us/product/S4575LL/A/applecare-for-iphone
Xulashada 3: Tag Apple hanad Bar
Miyaanan iibsato AppleCare aad iPhone? Miyaad ma qabto wax dhaawac caymis shil. Laakiin haddii aad iPhone weli waa in waqtiga damaanada ah, sidoo kale waxaad leedahay fursad aad u hesho waxa ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey lacag la'aan ah. Wixii iPhone dhawaan iibsaday, aad qabto muddo 14 cisho tan iyo markii aad heshay iPhone inuu ku soo laabto ama dib u yihiin haddii aanay nin-dhigay burburinta. Haddii ay ka soo damaanadda, weli waxaad ka fiirsan kartaa bixinta Apple u saxidda jabay iPhone, ama aan ka helo siyaabo kale. Si kastaba, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah talooyin waxtar leh oo ka Bar hanad ku saabsan jebiyey iPhone.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aadan u tag Apple hanad Bar, waxaad u baahan tahay inaad boos ka hore.
Warbixin dheeraad ah halkan: http://www.apple.com/retail/geniusbar/
Xulashada 4: iPhone Insurance
Caymiska iPhone Most daboolayaa dhaawaca shil ah. Haddii aad weligaa iibsaday mid, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka hubi shirkadaada caymiska si aad u fahamto sharciyadooda ku saabsan. Iyada oo ku xidhan caymiska, waxaad u baahan kartaa inaad lacag bixiso dayactir ah, laakiin weli aad u badan badbaadin karaan, is barbar inay iibsato hal cusub ama aad u hesho waxaa cusboonaysiiyey aad iskaa.
Fiiro Gaar ah: Wixii ku caymiska caymisku ayaa ku dhacaya noqon kara toddobaad ee la sugayo.
Xulashada 5: Hel Local Store Dayactirka iPhone Your jaban
Waa quruxsan qaali ah si uu u xaliyo iPhone ka jabay ee Apple marka ay ka mid ah aad damaanad. Haddii aadan rabin in aad wax badan oo ku saabsan, waxaad la xiriiri kartaa dukaanka dayactirka deegaanka si aad u cusboonaysiiyey. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa meelaha ugu bedelka dhinac saddexaad. Waxaa laga yaabaa in qiimaha qeybtii, laakiin tayada aan la hubin. Waxaad u baahan tahay in la sameeyo isku-dheelli.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku qaatay laba boqol oo doolar aad iPhone oo aad u malaynayso in ay tahay waxa si qamaar ku kacaya, waxaan ku talin lahaa in aad loo sameeyo la bedelo si rasmi ah Apple, halkii ay qeybo ka mid liita.
Haddii aad qabto wax fikrad ah kama helo dukaanka dayactirka deegaanka, waxay kaa caawin karaan: https://www.icracked.com/